GIS Software tsotra: GIS client for $ 25 sy Web Server ho an'ny $ 100
Androany dia miaina seho mahaliana isika, izay iarahan'ny rindrambaiko malalaka sy tompony, manampy amin'ny indostria amin'ny toe-javatra misy ny fifaninanana izay mandanjalanja kokoa isan'andro. Angamba ny olana ara-jeografia dia iray amin'ireo sehatra iorenan'ny vahaolana azo avy amin'ny loharano mivaingana toy ny vahaolana fahazoan-dàlana tsy andoavam-bola; nefa na izany aza,…
Featured, jeospatial - GIS, Pirinty voalohany
Mampidira ny angona avy amin'ny OpenStreetMap mankany QGIS
Ny habetsaky ny angon-drakitra ao amin'ny OpenStreetMap dia tena lehibe tokoa, ary na dia tsy nohavaozina tanteraka aza izy io, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia marina kokoa noho ny angon-drakitra voaangona tamin'ny alàlan'ny ravin-tsarintany miaraka amin'ny ambaratonga 1: 50,000. Ao amin'ny QGIS dia tsara ny mampiditra an'ity sosona ity ho toy ny sarin-tsarintany toy ny Google image ...
JOSM - CAD amin'ny fanovana angona ao amin'ny OpenStreetMap
OpenStreetMap (OSM) angamba iray amin'ny ohatra lehibe amin'ny fomba ahafahan'ny fampahalalana omena amin'ny fomba fiaraha-miasa manangana modely vaovao fampahalalana cartografika. Mitovy amin'ny Wikipedia, nanjary zava-dehibe ny fandraisana andraikitra ka ankehitriny ho an'ny geoportals dia tsara kokoa ny mametraka an'io sosona io any aoriana fa tsy manahy momba ny fanavaozana ny mombamomba anao manokana amin'ny lafiny ...
Cartografia, Pirinty voalohany